मोडल श्रीकृष्ण परियार
नेपालदृष्टि । नेपाली मोडलिङ्ग क्षेत्रमा सक्रिय हुदै आएका मोडल हुन् श्रीकृष्ण परिवार । सानै उमेर देखि कलाकारीतामा रुचि भएर यो क्षेत्रमा आएका मोडल परिवारले आधुनिक तथा लोक गीतहरुमा आफ्नो कुशल अभिनय देखाइ सकेका छन । नेपालमा मोडलिङ गरेर बाच्न सकिन्छ त? भन्ने प्रश्नमा परियार भन्छन,–‘नेपालमा मोडिलिङ त्यति व्यबसायिकरुपमा फस्टाइ नसकेको भए पनि आफुलाइ सानै देखि ग्ल्यामर क्षेत्रमा लगाब भएकोले नाफा नोक्सानको हिसाव मैले गरीहालेको छैन। ‘मोडलिङ्गमानै आफु खुसि हुने भएकोले यस क्षेत्रलाइ रोजेको बताउने मोडल श्रीकृष्ण परियार यसैलाइ निरन्तरता दिएर यसैमा स्थापित हुन कुरामा विश्वस्त छन । ‘मोडलिङ भनेको अभिनय कला र क्षमता प्रदर्शन गर्नु हो’उनि मोडलिङलाइ यसरी परिभाषित गर्छन ।
मेहनत र परिश्रम बिना कुनै पनि कार्यमा सफलता पाउन असम्भबनै छ । अहिलेको एक्काइसौ शताब्दीमा नाम र दाम कमाउने चाहाना सबैको हुन्छ । नाम कमाउन अनि चर्चित हुने रहर सबैको हुन्छ । यस क्षेत्र प्रतिको मोह बारे उनि यसरी बताउँछन ।
युवा पुस्ताका मोडलहरुको प्राय रोजाइ सिनेमा क्षेत्र हो । यसको पहिलो अभ्यास भनेकै मोडलिङ नै हो । त्यसैले मोडल कृष्ण पनि यसलाइ आत्मासात गर्दै छन आफनो सुनौलो भविश्यको लागि ।
किन यहि क्षेत्रलाई रोज्न भयो त भन्ने जिज्ञासा राख्दा श्रीकृष्ण भन्छन,–‘
मोडलिङ क्षेत्र अहिलेका युवा युवती हरुको सर्बाधिक रोजाइमा परेको क्षेत्र हो । त्यसैले युवा पुस्ताको आकर्षणमा रहेको यस रंगिन संसार तथा सिने संसारमा रमाउन नचाहने युवा पुस्ता सायद कमै मात्रमा होलान जस्तो मलाइ लाग्छ । नाम कमाउन अनि चर्चित हुने सबैको चाहना हुन्छ, सायद,त्यसैले म पनि यसै क्षेत्रप्रति आकर्षक भए ।
यी यस्ता चाहनाहरु लिएर मोडलिङ फाँटकमा लागि परेका श्रीकृष्ण परियारले, ‘जूनतार,चौपा बजार, पागल बनायो,पराइको डोलीमा’ जस्ता एक दर्जन जति गीतहरुमा आफ्नो कुशल अभिनय देखाइसकेका छन् । यति भएर उनलाइ अझै चित्त बुझिहालेको भने छैन । यहि क्रममा उनले गीतको भिडियो निर्देशनको काम पनि सुरु गरेका छन । आफ्नै रोजाइको लाइन भएकोले नृत्य निदेशन गर्न उनलाइ केहि कसरत गर्नु पर्दैन । लगभग दुइटै पेशामा उत्तिकै पोख्त रहेका श्रीकृष्ण परियारले नेपाली फिल्म ‘पङ्गा’ बाट नायकको रुपमा पनि आफुलाइ तय गरेका छन ।
अहिले निकै चर्चामा आएको ‘नेपालको माया’बोलको गीतमा पनि उनको दमदार अभिनय रहेको छ । जसमा स्थापित कलाकार हिउमाया,प्रकाश रन्का, कपिल मगर, भाष्कर मल्ल र हेमा थापाले पनि अभिनय गरेका छन । –साधना शर्मा
(कलाकारहरुकामाझँ निर्देशक केशव अधिकारी)
राधाकृष्ण मन्दिरमा ६ जना सम्मानित
देउवाको पुनः सभापति उम्मेदवारीको माहोल ?
नेपालमा नयाँ नक्साको प्रस्ताव पारितमा भारतमा हल्लीखल्ली